ओप्पोको एफफाइभ सिक्स जीबी सार्वजनिक | गृहपृष्ठ
Home बजार ओप्पोको एफफाइभ सिक्स जीबी सार्वजनिक
बजार7views
ओप्पोको एफफाइभ सिक्स जीबी सार्वजनिक
काठमाडौं । ओप्पोले मङ्गलवार आफ्नो नयाँ मोडल ‘ओप्पो एफफाइभ सिक्स जीबी’ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कालो रङमा बजारमा ल्याएको उक्त फोनमा पर्याप्त सञ्चय क्षमता भएको कम्पनीले बताएको छ । ओप्पो एफफाइभ सिक्स जीबीले प्रयोगकर्तालाई सहज अनुभूति प्रदान गर्नुका साथै स्टाइलिश तथा फेशनेबल ब्ल्याक कलरले उपभोक्तालाई सधैं फेशनेबल बेस्ट देखाउने कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीका अनुसार यो स्मार्टफोनमा ६ जीबी र्‍याम र ६४ जीबी रोमसहितको उत्कृष्ट प्रोसेसर जडान गरिएको छ । कम्पनीले उक्त फोनमा नयाँ उत्पादनमा उद्योगकै पहिलो एआई ब्यूटिफिकेशन प्रविधिको प्रयोग गरिएको बताएको छ । २ सयभन्दा बढी फेशियल रेकग्निशन स्पट्ससहितको यो प्रविधिले मानव मुहारको ग्लोबल डाटाबेसमार्फत फेशियल फिचर्स, आकार प्रकार, स्किन टोन तथा टाइप, लिङ्ग, उमेरलगायतका आधारमा फरक छुट्याएर ब्यूटिफिकेशन सुविधा उपलब्ध गराउँछ । फोनमा ६ इञ्चको पूर्ण एचडी फुल स्क्रिन डिस्प्ले जडान गरिएको छ । मिड रेञ्ज्ड स्मार्टफोनमा कम्प्याक्ट बडी र अत्यन्त पातलो फ्रेमसहित स्पष्ट तथा जीवन्त दृश्य सम्प्रेषण उपलब्ध गराउने यो नै नेपालको पहिलो स्मार्टफोन भएको कम्पनीको दाबी छ ।
ओप्पो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबी झाओ उक्त फोनका बारेमा भन्छन्, ‘भरखरै सार्वजनिक हाम्रो फ्ल्यागशिप मोडल ओप्पो एफफाइभका लागि प्राप्त माया र प्रतिक्रियाका लागि हामी समस्त उपभोक्ता तथा सरोकारवालाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । यो फोनले हाम्रा उपभोक्ताका लागि आवश्यकताअनुसार छनोटका लागि थप अवसर प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।’ एफफाइभ सिक्स जीबीको मूल्य रू. ४४ हजार ९ सय ९० निर्धारण गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।
ओप्पो एफफाइभ यूथ पनि सार्वजनिक हुँदै
कम्पनीले अर्को नयाँ फोन पनि सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले मङ्सिर २२ गते ओप्पो एफफाइभ यूथ सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको हो । यो फोनमा १६ एमपी सेल्फी क्यामेरा (एफ/२.०) र १३ एमपी रियर क्यामेरा जडान गरिएको कम्पनीले बताएको छ । ६ इञ्च फुल–स्क्रिन रहेको उक्त फोनमा फोनमा ब्यूल्ट–इन ब्यूटिफिकेशन प्रविधिलाई परिस्कृत गर्दै स्मार्ट आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सी र ओप्टिमाइजेशन्स समाहित गरेको बताएको छ । यो फोनको बजार मूल्य रू. २७ हजार ९ सय ९० तोकिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।